Badda Galili: sifooyinka. sameynta, noolaha iyo hanjabaadaha | Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 14/09/2021 10:16 | Ciencia
El badda galilee Waxaa meelo badan oo dunida ah looga yaqaanaa bad, laakiin gobollada kale waxaa looga yaqaan harada. Waana fikrad in badan waafaqsan astaamaha sida aan ku arki doonno maqaalkan. Waxaa Bariga Dhexe looga yaqaan harada Tiberiades ama harada Generaset. Waa haro biyo macaan leh oo dhererkeedu yahay 209 mitir oo ka hooseysa heerka badda oo leh astaamo gaar ah.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa maqaalkan inaan kuu sheegno wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato astaamaha, sameynta iyo asalka Badda Galili.
2 Samaynta Badda Galili
3 Kala duwanaanshaha noolaha
4 Hanjabaadyo ka imanaya badda Galili
5 Qiimaha taariikhda iyo dhaqanka
Eoo ah harada biyaha macaan oo 209 mitir ka hooseysa heerka badda, oo ku yaal waqooyi -bari Israa’iil, waqooyiga dooxada Urdun iyo xeebta magaalada Tiberiya. Basinkeeda waxaa ku jira aagagga Israa'iil, Suuriya, iyo Lubnaan. Masiixiyiintu waxay u haystaan ​​inay tahay muuqaal ka yimid tuducyo kala duwan oo Kitaabka Quduuska ah, oo ay ku jiraan Ciise oo dul socda biyo.
Badda Galili waa harada kaliya ee biyaha macaan ee reer binu Israa'iil. Aaggu waa qiyaastii 164-166 kiiloomitir oo laba jibbaaran, dhererku waa 20-21 kiiloomitir, ugu ballaaran waa 12 ilaa 13 kiiloomitir muggeeduna waa 4 kiiloomitir oo laba jibbaaran. Meesha ugu qoto dheer waxay ku taal waqooyi-bari, 44-48 mitir, oo qoto dheer celcelis ahaan 25,6-26 mitir. Waxaa bixiya ilaha dhulka hoostiisa iyo inta badan Webiga Urdun. Wabigu wuxuu dhex maraa harada wuxuuna sii socdaa koonfur qiyaastii 39 kiiloomitir. Meelo kale oo yaryar oo biyo ah, sida durdurrada Golan iyo buulshaha, ayaa biyahooda ka daadiya buuraha Galili.
Aagga baddu badiyaa waa kulayl xagaaguna qabow yahay xilliga jiilaalka, leh heerkul dhexdhexaad ah 14ºC. Qaar ka mid ah goobaha taariikhiga ah iyo diinta ee muhiimka ah ayaa lagu keydiyaa aagagga xeebaha, sida Kapernaum ee Kitaabka Quduuska ah.
Samaynta Badda Galili
Badda Galili waxaa lagu sameeyay habka tectonic. Dooxa halka uu ku yaal ayaa ka dhashay kala -goynta taarikada Carabta iyo Afrika iyo ballaarinta badda. Niyad -jabka ayaa la sameeyay dhammaadkii Pliocene, markii dambena harooyinka harada iyo biyo yar ayaa qabsaday qayb ka mid ah aaggiisa. Sidaa darteed, Badda Galili iyo Badda Dhimatay waa fidinta Dooxada Rift ee Badda Cas.
Xaqiiqda xiisaha leh ayaa ah in Dhulku soo maray xilli gaar ah oo qoyan intii lagu jiray Quaternary, ka dibna Badda Dhimatay, oo hadda koonfur ka xigta Badda Galili, ayaa fidday oo fidday ilaa ay gaadhay, laakiin biyihii waxay bilaabeen inay dib u yaraadaan muddo 20.000 sano ah .
Kala duwanaanshaha noolaha
Cimilo wanaagsan iyo biyo ku filan ayaa abuuraya ciid bacrin ah, kaas oo u roon koritaanka dhirta kala duwan. Beerista timirta, mooska, liinta iyo khudaarta ayaa soo jirtay qarniyaal badan, cawska dhulka xeebaha ahina ma aha wax aan caadi ahayn. Biyaha waxay ka kooban yihiin zooplankton iyo qolofyo kala duwan oo biyo iyo biyo-dhuleed ah (sida Potamon potamios), mollusks (sida Unio terminalis y Falsipygula Barroisi), microalgae iyo kalluunka (sida Tristramella simonis, Tristramella sacra, Acanthobrama terraesanctae, Qoyska Damsel, Silurus). qoyska iyo kalluunka kalluunka), teendhooyinka iyo nooc ka mid ah tilapia (Tilapiini), oo loo yaqaan San Pedro. Kalluunka qaar ayaa xiriir dhow la leh kalluunka kale ee ku nool harooyinka Afrika.
Ilaa bartamihii qarnigii XNUMX -aad, otter -ka reer Yurub (Lutra lutra) wuxuu ahaa naasley soo booqday biyaha Galili.
Hanjabaadyo ka imanaya badda Galili
Kalluumeysigu wuxuu ahaa dhaqdhaqaaq dhaqaale oo aasaasi ah oo ka jiray Badda Galili tan iyo wakhtiyadii hore. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo la tixgelinayo in magaalo qadiimi ah oo la xiriirta taariikhda masiixiga lagu dhisay hareeraheeda, dalxiiska ayaa horumaray. Maanta, waa aag caan ah oo aad ku qaadan karto fasaxyadaada mid ka mid ah xeebaha. Dabcan, waxqabadyada bani -aadamku waxay saamayn ku leeyihiin caafimaadka nidaamka deegaanka.
Sanadaha qallalan, heerka biyuhu aad ayuu hoos ugu dhacaa, taas oo welwel ku haysa khubarada cilmiga deegaanka, maxaa yeelay baddu waxay siisaa biyo la cabo dadka Israa’iil oo, marka ay dadku sii kordhaanba, baahidiisu way kordhaysaa. Dadku waxay ka welwelsan yihiin in biyuhu isu beddeli doonaan cusbada maxaa yeelay hoosta waxaa ku yaal ilo biyo milix leh. Dhinaca kale, noocyada Tristramella sacra lama arag tan iyo 1990 -meeyadii, sidaas run ahaantii waxaa loo arkaa dabar -go'ay.
Qiimaha taariikhda iyo dhaqanka
Injiillada Masiixiyiintu waxay sheegaan in Ciise sameeyey qayb ka mid ah adeeggiisa iyo mucjisooyin gaar ah xeebta harada gacmeed. Soo -dejiyeyaasha Yuhuuddu waxay aasaaseen kibbutz -kii ugu horreeyay. Waxsii sheegyada Islaamka qaarkood waxay u muuqataa in qaar ka mid ah ilaha dhulka hoostiisa ay ku qulqulaan harada, laakiin biyaha badankoodu waxay ka yimaadaan Webiga Urdun, oo ka soo qulqulaya Lubnaan xagga woqooyi una socda Israa’iil iyo Webiga Urdun ee koonfurta.
Badda Galili (oo mararka qaarkood loogu yeero harada Tiberias ama harada Kinneret) waxay ku dhex taal dooxada Rift Valley, diiqad cidhiidhi ah oo bilaabatay inay samaysato markii Saxanka Carbeed ka go'day Afrika tobanaan milyan oo sano ka hor. Meelo badan oo daadad ah ayaa daadsan hareeraha harada iyo koonfurta Waxaa loo rogay dhul beereed, oo muujinaya midab cagaar dhalaalaya.
Badda Galili waxay muddo dheer ahayd meel caan ku ah xujayda. Si kastaba ha ahaatee, tobanaankii sano ee la soo dhaafay, xaaladda harada ayaa noqotay mid aad u jilicsan. Labaatankii sano ee la soo dhaafay, heerka biyuhu aad ayuu hoos ugu dhacay, isagoo gaadhay ku dhawaad ​​heerkii ugu hooseeyay taariikhda 2018. Biyo yari waxay harada ka dhigtaa mid cusbaynaysa, taas oo ka dhigaysa mid aan suurtogal ahayn ilaha biyaha la cabbo. Isbeddelladani waxay sidoo kale khatar geliyaan dadka kalluunka waxayna dhiirrigeliyaan dhibka ubaxyada algae.
Fahamka heerarka biyaha ee soo dhacaya iyo raadinta siyaabo aad ku ilaaliso inay xasilloon yihiin ayaa ah mawduuca cilmi -baarista badan ee aagga. Sababaha hoos u dhaca waxaa ka mid ah roob la'aan, isticmaalka biyaha oo kordhay meelaha sare ee Lubnaan, heerkulka sare (kaas oo kordhin doona uumiga) iyo ballaarinta dhulka beeraha iyo meelaha waraabka ah ee hareeraha harada.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto Badda Galili iyo sifooyinkeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Badda galilee
Sida volcanoes u samaysmaan